मलजल उपचारको लागि जैविक विधिहरूको सारांश —— जैविक एरोबिक प्रक्रिया-उद्योग समाचार-शेन्जेन एसएच-एमबीआर टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड।
मलजल उपचारको लागि जैविक विधिहरूको सारांश —— जैविक एरोबिक प्रक्रिया
समय: 2020-07-30 हिट्स: 64
१. सक्रिय गरिएको स्लज प्रक्रिया
योसँग तुलनात्मक रूपमा कम लगानी र राम्रो उपचार प्रभावको फाइदाहरू छन्। यस टेक्नोलोजीले फोहोर पानी र सक्रिय स्लज (सूक्ष्मजीव) लाई मिक्स गर्दछ र तिनीहरूलाई प्रिन्टिंग र रing्ग फोहोर पानीमा जैविक प्रदूषकहरूलाई विघटन गर्न वायुगत बनाउँछ।
बायोसोलिडहरू त्यसपछि उपचारित फोहोर पानीबाट अलग गरिन्छ, र ठोसको केही अंश चाहिएको खण्डमा वातन ट्या tank्कमा फिर्ता गर्न सकिन्छ।
सक्रिय स्लजले केवल ठूलो मात्रामा कार्बनिक पदार्थलाई विघटन गर्न सक्दैन, तर रंगको केही अंश हटाउँदछ, पीएच मानलाई राम्रो-ट्युनिंगका साथै। योसँग उच्च अपरेटिंग दक्षता, कम लागत र राम्रो फ्लोन्ट क्वालिटी छ, र यो प्रिन्टिंग र फोहोर पानीलाई रंगाईको लागि उपयुक्त छ।
२. एसबीआर प्रक्रिया
अनुक्रमण ब्याच रिएक्टर (एसबीआर) एक सक्रिय स्लज फोहोर पानी उपचार टेक्नोलोजी अन्तर्गत वायु द्वारा संचालित हो।
यस प्रविधिको दुई फाइदा छन्: समयमा पुश-प्रवाह प्रभाव र अन्तरिक्षमा पूर्ण मिश्रण, जसले यसलाई अपवर्तक जैविक पदार्थको उपचारको लागि अत्यधिक सम्भावित प्रक्रिया बनाउँदछ।
बायोफिल्म प्रक्रिया फिलरको सतहमा बढेको बायोफिल्ममार्फत फोहोर पानीको उपचार गर्ने विधि हो (जस्तै फिल्टर सामग्री, डिस्क सतह, आदि)। बायोफिल्म विधिको छिटो सक्रिय र स्लज विधि भन्दा मुद्रण र रing्गीन पानीमा राम्रो डिकोलोराइजेशन प्रभाव छ।
बायोफिल्म प्रक्रियाको प्रिन्टि and र रing्गाउने फोहोर पानीको उपचारमा धेरै फारमहरू छन्, मुख्य रूपमा सम्पर्क ऑक्सीकरण विधि र जैविक फिल्टर सहित।
किनकि प्रिन्टिdर रing्गित फोहोर पानीको उच्च एकाग्रताको विशेषता छ र यसलाई गिरावट गर्न गाह्रो छ, शुद्ध बायोफिल्म विधिको लागि गाह्रो छ कि मुद्रण र रing्गित फोहोर पानीको उपचारमा सन्तोषजनक उपचार प्रभावहरू प्राप्त गर्न।
B. बायो सम्पर्क ऑक्सीकरण प्रक्रिया
यो प्रक्रिया बायोफिल्म प्रक्रियाबाट लिइएको हो र सक्रिय स्लज प्रोसेस र बायोफिल्म प्रक्रिया दुबैका फाइदाहरू संयोजन गर्दछ।
बायोफिल्म micelles, फिलामेन्टस ब्याक्टेरिया, फgi्गी, प्रोटोजोआ र मेटाजुआ बाट बनेको छ। फोहोर पानी बायोफिल्मको सम्पर्कमा छ। एरोबिक अवस्थाहरूमा, बायोफिल्मले फोहोर पानीमा जैविक पदार्थलाई सोस्छ। जैविक पदार्थलाई अक्सिडाईज गरिएको छ र माइक्रोजेरिजहरूद्वारा विघटित गरिएको छ, जसले फोहोर पानीलाई शुद्ध पार्न सक्छ।
यसको सानो मात्रा लोड, कम भूमि कब्जा, कम कीचड़, सुविधाजनक व्यवस्थापन, र गिरावटयोग्य विशेष जैविक पदार्थको यसको विशेषताहरूको कारण, हालैका वर्षहरूमा यसलाई औद्योगिक फोहोर पानी प्रिन्ट गर्न र रंगाउन व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको छ।
MB. MBR प्रक्रिया
त्यहाँ धेरै प्रकारका झिल्लीहरू छन्, र त्यहाँ विभिन्न प्रकारका छन् विभिन्न तरीकाले:
The विभाजन संयन्त्रको अनुरुप, यो प्रतिक्रियाशील झिल्ली, आयन विनिमय झिल्ली, पारगम्य झिल्ली, आदि मा विभाजित गर्न सकिन्छ;
The झिल्लीको प्रकृति अनुरूप, यसलाई प्राकृतिक झिल्ली (बायोमेम्ब्रेन) र सिंथेटिक झिल्ली (जैविक झिल्ली र अजैविक झिल्ली) मा विभाजन गर्न सकिन्छ;
The झिल्ली वर्गीकरणको संरचना अनुसार फ्लैट प्रकार, ट्यूब प्रकार, सर्पिल प्रकार र खाली फायर प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ।
एमबीआर प्रक्रियामा, झिल्ली विभाजन मोड्युलले निश्चित बाक्लो ब्याक्टेरियाको एकाग्रता र क्रियाकलाप मात्र बढाउन सक्दैन, तर ठूलो अणुहरू रोक्दछ जुन ह्रास गर्न गाह्रो छ। फोहोर पानीको उपचार गर्ने क्रममा, रासायनिक कच्चा पदार्थहरू पनि पुन: साइकल गर्न सकिन्छ, र पानीको केही अंश निकालेपछि पुनः प्रयोगका लागि मानक पूरा गर्न सक्छ।
वास्तविक अनुप्रयोगमा, मानिसहरूले पत्ता लगाए कि एमबीआर प्रक्रियाको प्रयोग गर्दा फोहोर पानीको निवास समयको लम्बाइले हटाउने दरमा ठूलो प्रभाव पार्दछ। निवास समय लामो छ र हटाउने दर अपेक्षाकृत उच्च छ। तर निवास समय धेरै लामो हुनुहुन्न, अन्यथा यसले स्लज एकाग्रता (MLSS) लाई घटाउँछ।
अघिल्लो: मलजल उपचारको लागि जैविक विधिहरूको सारांश —— जैविक एरोबिक प्रक्रिया
अर्को: MBR प्रक्रिया about को बारे मा केहि गलतफहमीहरु